Vaovao - inona no voankazo maina?
Inona no voankazo maina?
Ny voankazo maina dia voankazo izay nanala ny ankamaroan'ny atin'ny rano tamin'ny alàlan'ny fomba fanamainana.
Mihena ny voankazo mandritra io dingana io ka mamela voankazo maina kely matevina.
Anisan'izany ny manga, mananasy, cranberry, akondro ary paoma.
Ny voankazo maina dia azo tehirizina lava kokoa noho ny voankazo vaovao ary mety ho sakafom-bolo azo ampiasaina, indrindra amin'ny dia lavitra izay tsy misy fampangatsiahana.
Ny tsakitsaky ny voankazo dia matsiro ary mora tehirizina sy hohanina. Ny fanamainana na ny tsy fahampian-drano dia iray amin'ireo fomba tranainy indrindra hitehirizana ny sakafo. Mahatonga azy ireo haharitra kokoa ary hiaro azy ireo hohanina tsara.
Ny voankazo maina dia ampidirina amin'ny micronutrients, fibre ary antioxidants
Ny voankazo maina dia tena mahavelona.
Ny voankazo maina iray dia misy otrikaina mitovy amin'ny voankazo vaovao, saingy mifangaro ao anaty fonosana kely kokoa.
Amin'ny lanjany, ny voankazo maina dia misy hatramin'ny 3.5 heny ny fibre, vitamina ary mineraly voankazo vaovao.
Noho izany, ny serivisy iray dia afaka manome isan-jato betsaka amin'ny fihinanana vitamina sy mineraly marobe toy ny folat.
Na izany aza, misy ihany ny maningana. Ohatra, mihena be ny atiny vitamina C rehefa maina ny voankazo.
Ny voankazo maina mazàna dia misy fibra betsaka ary loharano manara-penitra mahery vaika, indrindra ny polyphenols.
Ny antioxidants polyphenol dia mifandraika amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana toy ny fanatsarana ny rà mandriaka, ny fahasalamana mandevon-kanina tsara kokoa, ny fihenan'ny oxidative ary ny fihenan'ny aretina maro.
Ny voankazo maina dia mora vidy sy mora tehirizina, ary noho izany antony izany dia lasa singa ilaina amin'ny sakafo, zava-pisotro ary resipeo izy ireo. Ity safidy mahasalama an'ny tsakitsaky mamy ity dia mety ho loharanon'ny antioxidant sy micronutrients sarobidy, misy vitamina, folate, potassium, magnesium ary koa fibre, fa kosa ireo vokatra ireo dia ambany tavy, asidra matavy feno tavy ary sodium.